Caddaynta tallaalka hadda waa qasab in la fuulo tareenka VIA ee tareenka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Tareenka » Caddaynta tallaalka hadda waa qasab in la fuulo tareenka VIA ee tareenka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Caddaynta tallaalka hadda waa qasab in la fuulo tareenka VIA ee tareenka.
Dhaqangelinta siyaasaddan tallaalka ee qasabka ah, iyadoo la raacayo awaamiirta ka timid Dowladda Kanada, waxay bixin doontaa lakab dheeraad ah oo ilaalin ah oo ka dhan ah COVID-19, waxayna ka dhigi doontaa tareenada kuwo badbaado leh, si rakaabku ay u sii wadaan inay ku safraan si kalsooni leh.
Oktoobar 30 - Rakaabka 12-sano iyo ka weyn ee raacaya tareenada VIA waa inay muujiyaan caddaynta tallaalka ama baaritaanka unugyada unugyada ee COVID-19.
Noofembar 30 - Rakaabka 12-sano iyo ka weyn ee raacaya tareenada VIA waa inay muujiyaan caddaynta tallaalka buuxa (COVID-19 shaybaarada molecular hadda lama aqbalayo).
Iyadoo la raacayo shuruudaha dawladda Kanada, VIA Rail waxay sidoo kale samaysay siyaasad tallaal oo khasab ah shaqaalaheeda.
VIA Rail Canada (VIA Tareenka) waxay soo bandhigaysaa siyaasaddeeda tallaalka ee qasabka ah iyadoo la raacayo qawaaniinta ay maanta soo bandhigtay Transport Canada. Siyaasadda tallaalka ee dhammaystiran ee Via Rail waxay u baahan doontaa qof kasta oo jira 12-sano iyo ka weyn oo saaran tareenadayada si ay u muujiyaan caddaynta tallaalka laga bilaabo Oktoobar 30.
Si loogu oggolaado rakaabka waqti inay si buuxda u tallaalaan, waxaa jiri doona muddo hal bilood ah oo kala-guur ah oo ay rakaabku awoodi doonaan inay safraan haddii ay muujiyaan shaybaar sax ah oo COVID-19 ah 72 saacadood gudahood waqtiga safarka. Muddada kala guurka ah waxay dhammaan doontaa Noofembar 30, markaas ka dib dhammaan rakaabka waa in si buuxda loo tallaalaa si ay u raacaan tareenadayada.
"Ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada dadkeena, rakaabkayaga iyo dadweynaha waa wax ka badan oo kaliya mudnaanta koowaad, waa qiyamka asaasiga ah ee si qoto dheer u socda. Tareenka VIADhaqanka iyo mas'uuliyadda aan dhammaanteen wadaagno," ayay tiri Cynthia Garneau, Madaxweynaha iyo Sarkaalka Sare ee Fulinta. "Hirgelinta siyaasaddan tallaalka ee qasabka ah, iyadoo la raacayo awaamiirta ka timid Dowladda Kanada, waxay bixin doontaa lakab dheeraad ah oo ka ilaalin ah COVID-19, waxayna ka dhigi doontaa tareenadayada kuwo badbaado leh, si rakaabkayadu ay u sii wadaan inay ku safraan si kalsooni leh."
Iyadoo la raacayo Xukuumadda Canadashuruudaha, Tareenka VIA sidoo kale waxay samaysay siyaasad tallaal oo qasab ah shaqaalaheeda. Kuwa aan bilaabin habka tallaalka bisha Noofambar 15 waxa la gelin doonaa fasax maamul.
Xataa iyada oo ay jiraan siyaasadaha tallaalka adag ee lagu rakibay tareenadayada, dhammaan tallaabooyinka kale ee jira waxaa fuliyay Tareenka VIA iyada oo laga jawaabayo COVID 19 ayaa weli sii jiraya. Kuwaas waxaa ka mid ah, iyo kuwa kale, shuruudaha xirashada maaskaro tareenadayada, iyo hubinta caafimaadka ka hor inta aan la fuulin rakaab kasta.